နှုတ်ခမ်းဖြူသမင် - ဝီကီပီးဒီးယား
နှုတ်ခမ်းဖြူသမင် (white-lipped deer) ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ ဇာဗောစကီးယမ် အယ်လ်ဘီရိုစထရစ် ဖြစ်သည်။
နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်သည် တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်အရှေ့ပိုင်း၏ အမြင့်ပိုင်းမြက်ခင်းပြင်များတွင်တွေ့ရသော သမင်မျိုးစိတ်တစ် မျိုး ဖြစ်သည်။ သိုရိုးလ်သမင် (Thorold's deer)ဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ ယင်းသမင်များကို တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့် ဘိုင်ချွမ်လု ဟု ခေါ်သည်။ တိဘက်အမည်သည် နှုတ်သီးပတ်ပတ်လည်တွင် အဖြူကွက်များရှိခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အနီးစပ် ဆုံးသော သက်ရှိဆွေမျိုးများမှာ သမင်နီ၊ အဲလ့်ခ်သမင်နှင့် ဆီကာသမင်တို့ဖြစ်လေသည်။
နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်များသည် တိဘက်အရှေ့ပိုင်းနှင့် တရုတ်ပြည်၊ ကျင်ဟိုင်းပြည်နယ်တို့ရှိ တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသ၏ မြင့်မားသော အအေးပိုင်းမြက်ခင်းပြင်များတွင် နေထိုင်ကျက်စားကြသည်။ ဤသမင်များသည် ဗဟိုအာရှသမင်နီ၏ မျိုးစိတ်ကွဲတစ်မျိုးဖြစ်သော ရှိုးသမင်နည်းတူ သဘာဝဂေဟကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလေသည်။ ဤသမင်မျိုးစိတ်ကို ၁၈၈၃ခုနှစ်တွင် နီကိုလိုင် ဇာဗောစကီးရ်က ပထမဦးစွာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးနမူနာများကို ဒဗလျူ ဂျီ သိုရိုးလ်က ရယူခဲ့သည်။ နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်ကောင်ရေတစ်ရာ ခန့်ကို တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များတွင် မွေးမြူပြသထားပြီး သဘာဝတောရိုင်းအတွင်းတွင် ကောင်ရေငါးသောင်းမှ တစ်သိန်းခန့် ရှိလေသည်။
ဤသမင်မျိုးစိတ်ကို နီကိုလိုင် ဇာဗောစကီးရ်က ၁၈၈၃ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးသတိပြုမိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပထမဆုံးနမူနာရယူပေးခဲ့သော ဒဗလျူဂျီ သိုရိုးလ်ကို ဂုဏ်ပြု၍ သိုရိုးလ်သမင်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မျိုးရင်းအမည်ကိုမူ ဇာဗောစကီးရ်ကိုကိုယ်စားပြု၍ ဇာဗောစကီးယမ်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ သိပ္ပံအမည်ဖြစ်သော အယ်လ် ဘီရော့ထရစ်သည် လက်တင်ဝေါဟာရများဖြစ်သော “အဖြူရောင်”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် “အယ်လ်ဘက်” နှင့် “နှာတံ”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် “ရော့စထရမ်”ဟူသော ဝေါဟာရများမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ယင်းလက်တင်ဝေါဟာရများသည် အဖြူ ရောင်နှုတ်သီးနှင့် နှုတ်ခမ်းများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် သမင်၏တရုတ်နာမည်ဖြစ်သော “ဘိုင်ချွမ်လု” ဟူသော ဝေါဟာရမှ လာသည်။ ယင်းအမည်သည် “နှုတ်ခမ်းဖြူသော”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ယင်းအကြောင်းကြောင့် နှုတ်ခမ်း ဖြူသမင်ဟု လူသိများရခြင်း ဖြစ်သည်။
နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်ကို ယခင်က ဆားဗက်စ်မျိုးရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ယင်းမျိုးရင်းတွင် အခြားသော သမင် မျိုးစိတ် ၁၁မျိုးလည်း အလားတူပါဝင်လေသည်။ သို့သော်လည်း မကြာသေးမီအတောအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော မျိုးဗီဇ ဆိုင်ရာလေ့လာချက်များအရ ဤမျိုးစိတ်သည် ဆားဗက်စ်မျိုးရင်းတွင် ယခင်ကယူဆခဲ့သကဲ့သို့ မျိုးနီးစပ်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်ကို ယင်း၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးရင်းတွင် သီးခြားသတ်မှတ်ခွဲခြားထားလေသည်။ သို့သော်လည်း ဤမျိုးစိတ်အား တာဝန်ရှိသူအများအပြားက ဆားဗက်စ်မျိုးရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားဆဲ ဖြစ်လေသည်။
နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်သည် အရွယ်အစားအကြီးမားဆုံးသမင်မျိုးစိတ်များအနက် တစ်မျိုးအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်အရှည်သည် ၂ မီတာ (၆ပေ) ရှိသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် (ပေါင်၅၀ဝ) အထိလေးသည်။ သမင်ဖိုများတွင် ဦးချိုတက်၅ခုပါသောဦးချိုများ (ဦးချိုတစ်ခုစီတွင် ဦးချိုတက်၅ခုစီ ပါသည်) ရှိသည်။ ယင်းဦးချိုများသည် ၁.၃ မီတာ (၄ပေ) ရှည်သည်။ အမေရိကန်အဲလ့်ခ်သမင် (သို့မဟုတ်) ဝါပီတီသမင်၏ ဦးချိုတက်၆ခုပါသောဦးချိုနှင့် ဆင်ဆင်တူသည်။ သို့သော် ဒုတိယဦးချိုတက် မပါဝင်ပေ။ ဝါပီတီသမင်နည်းတူ နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်သည်လည်း မြက်စားသောသမင်မျိုးဖြစ်ကာ ကြီးမားသောနားရွက်များ၊ ပခုံးပိုင်း လပို့နှင့် တင်ပါးပိုင်းရှိကြီးမားသောအကွက်နှင့် အမြီးတိုတို့ ရှိလေသည်။ သမင်ပေါက်ကလေးများသည် မွေးကင်းစတွင် အစက်အပြောက်မရှိပေ။
↑ Harris, R.B. (2014). "Przewalskium albirostris". IUCN Red List of Threatened Species 2014. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှုတ်ခမ်းဖြူသမင်&oldid=697673" မှ ရယူရန်